Ụbọchị My Pet » Chọrọ Mkpapụ gị Dream Nwanyị? Mụta Ndanda
Olee otú ọtụtụ ugboro nwere nke a mere gị? Enyi gị na ị na-guzo a mmanya na ị na-ahụ ihe mara mma nwaanyị. Ị na-akpọ dibs na mgbe ahụ na-abịa na a akara. Ị nwere ike na-eche na nwaanyị chọrọ ịnụ akara ma mgbe ahụ,, ọma, na ị na-ire kegide. Kama ịbụ ike n'ala nwaanyị ị ejedebe ịlụ floored site enyi gị, "Cat nwetara ire gị?"
Onye ọ bụla nwere òkè ha nke anwụrụ na ụlọ akwụkwọ. Na ndụ gị kwa, e nwere a girl na ị ga-achọ ime nke ukwuu na - ewere ya, gaa kirie ihe nkiri, jide aka na n'ozuzu nwere oké oge. Ma ị pụrụ mgbe N'igbu ya ná nkenke obi - ma i chere na ị bụghị mma ma ọ bụ na ị ga na-ahụ gị nrọ nwaanyị na ogwe aka nke ụlọ akwụkwọ Adonis. Ma ị ndopuyo nyere, nanị na-eche banyere ya na-asụ ude.
Zuru-agbanwe isiokwu - ihe ị maara banyere ndanda? I n'ezie nyere ndị a dị nta ụmụ ahụhụ ọ bụla echiche, i? Ihe mbụ na-agbata gị n'uche mgbe ị na-ahụ a ógbè nke ndanda bụ bash ha.
Ma, ị maara na ndanda na-akụziri anyị dị oké mkpa ná ndụ ihe ka n'ala a nwaanyị? Ka anyị hụ otú.
Act #1 - Echela ihe na-eme
Ndanda na-mgbe niile na-aga n'ihu; ha na-mgbe na-eme ihe. Ọtụtụ ndị inyom ịhụnanya nwoke na-elekọta. Ya mere ọ bụrụ na ị na-eche gị nrọ nwaanyị na-abịa gị na Abigel ịhụnanya, mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ichefu ọtụtụ ndị inyom na-amasị gị. Ọ bụrụ na ị chọrọ n'ala gị nwaanyị nanị na-eje ije ka ya na-asị na ị na-amasị ya. Na nado ọ ga-asị na ọ dịghị.
Act #2 - Adala mba
Ndanda adịghị ịkwụsị - ha maara ha na-aga ma ha ruru ya gburugburu ọdịda na-adọpụ uche. Ị nwere gị na mbụ jụrụ? Echegbula; ọ bụghị na njedebe nke ndụ. Gbalịa ọzọ ... Chee echiche nke ndị nkiri dike na-emecha-jisiri woo ha ndị inyom, ọbụna mgbe ha jụrụ ugboro ugboro.
Act #3 - Ka lekwasịrị anya
Ndanda nwere ihe mgbaru ọsọ ma kpọmkwem na-elekwasị anya - ha mara ma ọ bụrụ na ha nwere ike ịzọpụta maka harsher mgbe ha na-agbụ na-anwụ anwụ. Ọ bụrụ na ị na-amasị a nwaanyị na ị ga-achọ n'ala na-na-azụ ya. Dị nnọọ hụ na ị na-agbanwe gị edoghi na style.
Act #4 - Zọpụta ndị gị edoghi
Ndanda rie ụfọdụ n'ime nri ha na ha zọpụta ụfọdụ. Dị ka nwanyị ahụ banyere ị kwesịrị ị na efu gị niile ammos ke kiet ke otu laa. Ịbụ na-akpa ọchị; na-okike na-mbụ na n'ikpeazụ, ọ ga-abụ nke gị.
Ọ bụghị mmetụta ọzọ na ndanda bụ ndị na-abaghị, ị na-? Ee, ha na-akụziri anyị ọtụtụ ihe ndị dị mkpa nke ndụ, gụnyere nke a kasị ochie otu nke inwe ike iji na-adọta a nwaanyị flooring ya. Ọ bụrụ na ị nwere nwaanyị a ị chọrọ n'ala arụ ọrụ nanị dị ka ndanda ebe a. Mgbe ahụ na-abịa azụ ma na-agwa m ma ọ bụrụ na ị ka na-asụ ude dị ka gị nrọ nwanyị a na-whisked pụọ site ọzọ Adonis.